Ukuphonononga - Apha ungashiya impendulo yakho engalunganga okanye impendulo
yiHGH Thailand Septemba 20, 2018
Inkonzo enkulu, ukunxibelelana kunye nokugqibeleleyo, ukukhulumisana okulula kabini ngokusebenzisa ulutupup kwaye ngokuqinisekileyo ukuqonda kwaye uphendule kuzo zonke iinkxalabo zam, ziyinyani, kungekhona ugaxeko, ukuhanjiswa ngexesha elifana nokuthembiswa, imeko yokuhanjiswa kuyinto emangalisayo, zikhulu they , ngenxa yeziphumo ndiya kuba nesinye isigqibo kwiiyure ze-48
Umthombo ohloniphekileyo, i-Pfizer yaseTurkey iqinisekisile ukuba imveliso yam yayinemveliso yangempela. Inkonzo iye yinto enhle kakhulu, inokuhanjiswa eThailand, ukulibaziseka okufutshane kodwa kuyamkeleka. Ndiyisebenzisa kwakhona ngaphambi kokuba ndihambe ekhaya.
Ukuthenga amaxesha ambalwa. Unokwethenjelwa kwaye iimveliso zithe tye. Ukuziswa ngokukhawuleza. Unxibelelwano lukhulu kakhulu. Ngaba kuya kuncomeka kwabanye.
SM Matshi 08, 2019
ukuhanjiswa eBangkok kuthatha iiyure ze-2 emva kokubeka umyalelo, ukuhlawulwa ngemali, ndincoma wonke umntu, mbulela
Laurent Februwari 22, 2019
Enkulu inkonzo. Uqhagamshelwano olukhulu. Kwaye iimveliso zisekuqaleni. Epheleleyo. Ivenkile yeenkwenkwezi ze-5.